Madaxa Kooxda Barcelona Sandro Rosell Oo Beeniyey In Barcelona Siyaasad Ku Lug Leedahay - jornalizem
Madaxa Kooxda Barcelona Sandro Rosell Oo Beeniyey In Barcelona Siyaasad Ku Lug Leedahay
Madaxa kooxda Barcelona Sandro Rosell ayaa beeniyey in Barcelona aysan ku lug lahayn wax siyaasad ah waxana uu sheegay in soo bandhigida Senyera ee kulankii Real Madrid ay ahayd uun mid lagu sheegayo salka kooxda halka uu ka soo jeedo.
Kooxda ayaa waxa ay diyaarisey in taageere kasta uu kor u qaado kaar midabaysan kahor inta aysan bilaaban ciyaartii El Clasico.
Senyera ayaa ah calanka gobolka Catalonia waxaana soo bandhigida kooxda Barca kulankii Clasico loo arko in lagu taageeraayo isku daygooda ah inay helaan xornimo.
Si kasta ha ahaatee Rosell oo la hadlayay El Periodico ayaa yiri: “Illaa iyo inta aan ka xasuusan karo mar walba Barcelona waxa ay isticmaali jirtey dhacdooyinka waaweyn Senyeres,”
“Ma garanayo sababta hadda ay sidan saameynta ugu yeelatay. Mana fahmi karo sababta dadka ay uga caroonayaan marka ay Barca ay soo bandhigto Senyera. Marka aan tagno garoonka Athletic Bilbao waxay soo bandhigaan Ikurrinas mana ka xanaaqno annaga marka ay Madrid calankooda Spanishka ay soo bandhigaan.
“Sidaa si la mid ah, waa iska caadi in la difaaco halka aad ka soo jeedo. Marka arrintan waa laga badbadiyey oo la buunbuuniyey.
“Barca malahan siyaasad, Barca waxa ay xaqiijineysaa uun xididka ay la leedahay Catalan oo dhiigeeda ku jira. Marnaba dhinac ma raacno, waxaan sheegeynaa uuninaan Barca nahay. Haddii aan siyaasad ku jiri lahayn waxaan soo qaadan lahayn Estelada [calanka Catalan].”